ဘယ်လိုသံသယမျိုးတွေကို လက်သင့်ခံနေရဦးမှာလည်း။ အစကတည်းကရှုံးခဲ့ပြီးမှတော့ နှစ်သိမ့်အပြုံးတွေက ဘာလုပ်ရမှာလဲ? နှစ်သိမ့်တယ်ဆိုတာ စော်ကားခြင်း တစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်လေ။နှစ်သိမ့်ပြုံးထက်စာရင် အမုန်းကမှ ငါ့အတွက်လှလိမ့်ဦးမယ်။ ကျိန်စာဆိုးတွေစိုးမိုးတဲ့ငါ့ဘ၀ထဲကိုမှ နင်ကအလွမ်းမိုးတွေ ရွာရက်တယ်။ နှလုံးသားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက နှစ်ခုမဟုတ်တော့လည်းခက်တယ်။ အပြုံးတောင်အတုလုပ်ကြတဲ့လောကကြီးမှာ ဘာကများ စစ်မှန်ဦးမှာလဲ? စက်ရုံထုတ်(ဖောဖောသီသီ) နှလုံးသားတွေနဲ့ ငါ့လာမချစ်စမ်းနဲ့ဟာ။ နံတယ်။ extra date တတ်ထားတဲ့ အချစ်တွေနဲ့ လာလာမနှောင့်ယှက်စမ်းနဲ့။ date လွန်လာရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှိုက်ပုံးထဲ သွန်ပစ်လိုက်။ ဘာတဲ့ဆိုရင် ငါ့နှလုံးသားကိုပဲ လာလာခလုတ်မတိုက်စမ်းနဲ့။ စိတ်ရှုပ်လွန်းလို့။ ငါ့ဟာငါ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်အသည်းကိုယ် ဖြည်းဖြည်းချင်းခွဲနေရတာကမှ ကဗျာဆန်လမ့်ဦးမယ်။ ဓါးတစ်ချောင်းလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓါးအိမ်ထဲထည့်ပိတ်ထားလို့ရရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ အနာဂတ်ကို တောင်မလွမ်းတာ အတိတ်ကို ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ငါနောက်မဆုတ်ချင်ဘူးဟာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကိုနောင်တတွေမပေးပါနဲ့။
ဘယ်အချိန်ထိရှိမလဲ ငါ့နောင်တတွေ။ နောက်ဆုတ်ဖို့မစဉ်းစားပဲချစ်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ နောက်တွန့်မိတာကပဲ ငါ့ညံ့ဖျင်းမှုဖြစ်ခဲ့လား။ နင့်သံသယတွေက ငါ့ကိုတွန့်ဆုတ်စေတာတော့လည်း အမှန်ပဲလေ။ ငါကြောက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ နင့်ကိုယ်နင်တောင် သံသယဖြစ်နေတဲ့အချစ်ကို ငါက ဘယ်လိုသတ္တိနဲ့ ယုံကြည်ရမှာတဲ့လဲ..? ကြိုးထုံးကိုဖြည်ချင်ရင် ကြိုးထုံးတဲ့သူကို ရှာရမယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အချစ်က နင်မဖြည်နိုင်တဲ့ ကြိုးတစ်ထုံးဖြစ်ခဲ့ရင်ကော….? နင်မဖြေနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လား။
တကယ်တော့ နင့်သံသယဆိုတာက ငါ့အပေါ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ နင်မညာပါနဲ့။ နင့်ကိုယ်နင်သံသယဖြစ်နေတာပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တတ်တဲ့ သတ္တ၀ါဆိုတာ မေ့မထားနဲ့လေ။
ငါက နင့်ဆီမှာဘာရှိလဲဆိုတာမကြည့်ပဲ နင်ဘာလိုသလဲဆိုတာပဲ ကြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်ပါလေ။ လိုတာတွေကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ ပိုတာတွေ တွေ့လာရတဲ့အခါမှာ နင့်ဘ၀မှာ ငါဆိုတာ အစကတည်းက မရှိတာသိလာခဲ့ရတယ်။ တကယ်တော့ငါက ကြိုးတပ်ခံရတဲ့ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်သာပါ။
တကယ်တော့ နင်ရောငါပါ မမှားခဲ့ပါဘူးလေ။ ကံကြမ္မာက ပုစ္ဆာကူးမှားခဲ့တာပါ။ ငါညံ့ခဲ့တာပါ။ ၁ နဲ့ ၁ ပေါင်းတာ ၂ မဖြစ်ပဲ ၁ ဖြစ်နေတယ်ဆိုကတည်းက ငါရိပ်မိခဲ့ဖို့ကောင်းတာ။ ငါက ၁ မှမဟုတ်ခဲ့ပဲ! ငါကသုညပဲလေ။
ငါ့အပြစ်တွေပါလေ။ မေ့လျော့နေတဲ့ နှလုံးသားနှစ်ခုကို ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ် လှုပ်နိုးခဲ့တာ ငါပါ……………..
Posted by wai linn at 2:38 AM